बर्दिबास महोत्सव : थोरै पायो, धेरै गुमायो - The Public Today
बर्दिबास महोत्सव : थोरै पायो, धेरै गुमायो
१५ दिनमा एक लाख दर्शकको माया पाउँदै बर्दिबास महोत्सव सफलतापूर्वक मंगलबार साँझ समाप्न भयो । तर, महोत्सवका आयोजक बर्दिबास उद्योग बाणिज्य संघमाथि थुप्रै प्रश्न उठेको छ भने महोत्सवले सम्भावना पनि जागायो ।
गत फागुन २५ गते प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्घाटन गरेको महोत्सव चैत्र १० गते प्रदेश २ की प्रदेश सभा सदस्य सारदा थापाले समापन गरिन् । बर्दिबासको कृषि, पर्यटन, कला, संस्कृति तथा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो । तर, उद्देश्यमा महोत्सव भने केन्द्र हुन सकेन ।
बेल पाक्यो हर्ष न बिषमात झै भयो बर्दिबासका व्यापारी, किसान र कलाकारलाई महोत्सव । यहाँका व्यापारीले महोत्सवमा खासै चासो राखेको देखिएन । आयोजकले महोत्सवलाई बुझ्न पनि सकेन । फलानो कलारकार आउँदैछ, चिलानो कलाकार आउँदैंछ भन्दै दिनभरी टेम्पुमा माईक राखेर प्रचार गर्दै हिड्यो आयोजकले । तर, उद्देश्य अनुरुपमा काम गर्न भने सकेन ।
१५० स्टल मध्ये केही मात्रै समान्य खालका स्टालहरु थिए, बर्दिबासका व्यपारीको । महोत्सवमा कमाई हुने स्टल भने बाहिरकै व्यपारीले राख्न सफल देखिए । आफ्नो कमाईबाट महोत्सव आएका बर्दिबासतिरका उपभोक्ताले स्टलमा सरसमान किने । त्यसको फाइदा बर्दिबासका व्यपारीको पोल्टामा पर्न सकेन । बाहिरै व्यापारीले खल्तीमा लिएर गएका छन् ।
बर्दिबास उद्योग बाणिज्य संघले बर्दिबासका कलाकार, कृषक र व्यपारीलाई महोत्सवको महत्व नै बुझाउन सकेनन् । महोत्सवको उद्देश्यमा योजना बनाएर आयोजकले काम गर्नु पर्ने थियो त्यस अनुरुप गर्न चुके ।
यहाँका दर्शकले बरु ५५ को टिकट खरिद गरे महोत्सवको इज्जत बचाए । तेस्रो महोत्सवको समापनसंगै उद्योग बाणिज्य संघले यहाँको जनताको रकम बाहिरका व्यपारी मार्फत अरु सहर बजारमा तेस्रो पटक पनि पठाएर एक प्रकारले ह्याट्रिक नै गर्न सफल भएको छ । यो बाणिज्य संघको लागि घातक हो । हिरा सबै बाहिर गयो, फलाम चाँही यहाँको व्यपार संघको हातमा परेको अवस्था छ । गाना, बजाना, खेलसमाग्री सबका सब बाहिरको । महोत्सव ठेक्केदार पनि बाहिरकै । मात्र नाम रह्यो बर्दिबास महोत्सवको ।
बर्दिबासको कला, संस्कृति, व्यपार प्रबद्र्धनको नाममा लगाइने महोत्सवले बर्दिबासबासीको कल्याण गर्न सकेको छैन । आयोजकले लाखौं लगानी गरेर महोत्सव लगाउँछन् । तर, त्यसको फाइदा सबै बाहिरका व्यपारीले लैजान्छ । अनि कसरी भयो यहाँको व्यपार प्रबद्र्धन ?
राष्ट्रिय स्तरको कलाकार बोलाउने, नचाउने उनीहरुलाई दाम दिने, गाउँमा लुकेका प्रतिभालाई खोजी नगर्ने महोत्सवले कसरी यहाँको कला र संस्कृतिलाई बचाउँछ । महोत्सवको काम हो आफ्नो ठाउँको वस्तु, सेवा, संस्कृति, खानपान, मठमन्दिर, कलाकार, व्यापारबारे प्रचारप्रसार गर्ने । तर, यस विषयमा आयोजकले गम्भिर भएर कहिले सोच्दैंन ।
केही स्थानीय कलाकार, एक घरी केरा देखाएर, एउटा टिभी सो–रुमको स्टल राखेर कसरी महोत्सवको उद्देश्य पुरा भयो ? यो त कर्मकाण्डी बाहेक अरु केही हुनै सक्दैन तेस्रो महोत्सवले यहि भन्दैं छ । यस्तो पाठ त यस अघिको महोत्सवले पनि आयोजकलाई सिकाएकै थियो । तर, आयोजकले पुरानै प्रवृत्ति यसपालि पनि देखायो । सानदार ढङ्गले आफ्नै उद्देश्यलाई पाखा लगाएर महोत्सव सफल भएको भन्दै आयोजकले ढोल पिठिरहेका छन् ।
बर्दिबास उद्योग बाणिज्य संघको कमिकमजोरीलाई प्रदेश सभा सदस्य सारदा थापाले घुमाउरो शैलीमा समापन सभा भनिन् । तर, खुलेर आयोजकको आलोचना गर्नबाट उनी पनि चुकिन उनैलाई प्रश्न गर्नुहोला ।
तर, बर्दिबास महोत्सवले एउटा सम्भावना त जरुरी जगाएको छ । बर्दिबासमा अब चौथौं महोत्सव पनि कसैले आउने साल गर्ने छ । त्यो महोत्सव बर्दिबासको आफ्नै महोत्सव हुनेछ । महोत्सवले बर्दिबासको नाम राष्ट्रिय कलाकारको मध्यले विश्वभर स्थापित गर्न जरुर सहयोग पुगेको छ । यो काम उद्योग बाणिज्य संघ बर्दिबासले गर्न सफल भएको छ । कठिन समयमा पनि उद्योग बाणिज्य संघले महोत्सवलाई शान्ति वातावरणमा सम्पन्न गर्न पाउनु साँच्चै खुशीको कुरो हो ।
बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर विदुर कुमार काकीले सहयोग नगरेको बर्दिबास उद्योग वाणिज्य सङ्घ बर्दिबासका अध्यक्ष प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले खुलेर जनमानसमा भने । विवाह, समान्य कार्यक्रममा पुग्ने मेयर कार्की १५ दिनको महोत्सवमा न उद्घाटनमा आए न त समाप्नमा नै अनुहार देखाए ।
उनी बर्दिबास नगरबासीको मेयर हो की कुनै एक पार्टीको प्रश्नको उत्तर चाहन्छन् यहाँका व्यवसायी । महोत्सवले साँचो अर्थमा भन्ने हो भने नगर पिताको अभिभावकत्व पाउन सकेनन् । मेयर कार्की महोत्सवमा गएर आयोजकको समस्या बुझेर सहयोग गर्नु पथ्र्यो । तर, उनले त्यो चाहेनन् ।
महोत्सको आम्दानीले बर्दिबास उद्योग बाणिज्य संघले समाजमा रचनात्मक काम भने गरिरहेको छ । दोस्रो महोत्सको आम्दानीले रक्तसंचार केन्द्रको भवन बनायो । यस बर्षको महोत्सवको आम्दानीले आफ्नो कार्यालयको माथिल्लो तल्ला निर्माण गर्न लागेको बर्दिबास उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले बताए ।
तीन वर्षको कार्यकालका लागि २०७० सालमा चुनाव जितेका क्षेत्री नेतृत्वको टिम दुई कार्यकाल बिताए । नयाँ कार्य समितिका लागि आउँदैं असार मसान्त भित्र चुनाव बनाउँदैं छन् । क्षेत्रीको नेतृत्व टिमकले शाखामा रहेको बर्दिबास उद्योग बाािणज्य संघ बाणिज्य महासंघमा आबद्ध गराउन सफल भयो । बर्दिबास उद्योग बाणिज्य संघ अब छुट्टै व्यपारी भयो । यो समाचार आजको द पब्लिक टुडेमा छ ।